Bixinta Khibrad Isticmaalaha Isticmaalka leh HTML5 | Martech Zone
Bixinta Khibrad Isticmaalaha Joogtada ah ee HTML5
Arbacada, February 20, 2013 Arbacada, February 20, 2013 Jenn Lisak Golding
Suuqa moobiilku wuu kala jaban yahay sidii hore, waqti ka dib, wuu sii kala jajabi karaa.
Latest cilmi baaris ay sameysay shirkadda comScore Inc. daboolaya rubucii ugu dambeeyay ee 2012 waxay muujineysaa in Android ay sii haysatay booskeeda OS-ka ugu caansan ee moobiilka. 53.4% ​​qalabka mobilada ayaa hadda ku shaqeeya Android OS, tanina waxay ka dhigan tahay kor u kac dhan 0.9% rubucii hore. Apple macruufka Apple wuxuu awood u leeyahay 36.3% dhammaan qalabka moobiilka, laakiin wuxuu arkay koror ballaaran muddadan, iyadoo koror ka 2% ah rubucii hore. Faa’iidada Apple waxay umuuqataa inay tahay qasaaraha BlackBerry, maadaama qalabkani kaliya uu khuseeyo 6.4% dadka isticmaala taleefannada casriga ah, taas oo runtii ah 2% khasaarihii ka soo baxay rubuca saddexaad. Booska intiisa kale waxaa degan ciyaartoy yar yar sida Windows, Symbian, iyo kuwa kale.
Tirooyinka tilmaamaya Android inay yihiin awoodda ugu weyn ee mobilka mooyee, si kastaba ha noqotee, waa dhagar. Isticmaalayaasha iPhone waxay ku hawlan yihiin ecommerce wax ka badan kuwa isticmaala Android. Intaas waxaa sii dheer, dadka isticmaala taleefannada casriga ahi maahan koox isku mid ah. Qalab fara badan ayaa ku shaqeeya OS-kan, qalab walbana si weyn ayuu ugu kala duwan yahay cabirka shaashada iyo astaamaha kale. Xitaa macruufka Apple, illaa hadda, oo si joogto ah ugu fidiya aaladaha, waxay umuuqataa inay marayaan wadada Android, iyadoo iPhone 5 uu leeyahay shaashad shaashad ka duwan kuwii ka horreeyay. Iyada oo ay soo kordhayaan qalab cusub oo qaabab kala duwan leh iyo cabbirka shaashadda oo diyaar u ah bilaabista, iyo xitaa nidaamyada cusub ee hawlgalka sida Android iyo Ubuntu, ayaa dhammaantood lagu wadaa inay galaan goobta mobilada. Natiija ahaan, way sii adkaan doontaa in la horumariyo barnaamijyada hooyo ee si muuqata uga dhex shaqeeya qalabka.
Tani waxay caqabad weyn ku tahay tafaariiqlaha oo isku dayaya inuu siiyo khibrad macaamiil oo joogto ah barnaamijyadooda moobiilka. Dhaqanka hadda jira ee lagu kobcinayo barnaamijyada luuqadda hooyo ee aaladda ma aha oo kaliya inuu tarmo shaqada, laakiin sidoo kale wuxuu u horseedaa khiyaanooyin badan oo furfuran aaladaha kala duwan. Kala duwanaanshaha qaabeynta qalabka ayaa hoos u dhigaya khibrada isticmaalaha si aad ah.
Marka, sidee wax uga qabannaa dhibaatadan?
HTML5. U adeegsiga HTML5 sidii barxadda barnaamijka moobiilka ayaa bixisa natiijooyinka saxda ah ee muuqaalka iyo waxqabadka dhammaan aaladaha: Android, iOS, iyo xitaa daalacashada shabakadaha dhaqameed. Fiidiyowga iyo taageerada warbaahinta, lambarka nadiifka ah, kaydinta wanaagsan - kuwani waa dhammaantood faa iidooyinka isticmaalka HTML5.
Ma isticmaaleysaa HTML5? Sababta ama sababta?
Tags: Content Suuqhtml5m-ganacsigaSuuqa mobiladataleefannada gacantaKiniiniga